बढ्दो उत्पादन प्लेसमेन्ट उद्योग | Martech Zone
बढ्दो उत्पादन प्लेसमेन्ट उद्योग
आइतवार, नोभेम्बर 20, 2011 आइतवार, नोभेम्बर 20, 2011 Douglas Karr
एप्पल उत्पादनहरू २०१० मा top 30 शीर्ष फिल्महरूको %०% मा देखा पर्‍यो। नाइके, चेभी र फोर्ड २%% मा। सोनी, डेल, ल्याण्ड रोभर र १lock% मा Glock। उत्पादन प्लेसमेन्ट अब २$ अरब डलरको उद्योग हो। वास्तवमा, अर्को जेम्स बन्ड फिल्मले यसको बजेटको एक तिहाइ कभर गर्नेछ product million मिलियन उत्पादन प्लेसमेन्ट राजस्वमा।
पोन्टियाकले १० दिनमा १,००० सोल्टिसिसहरू बेच्ने आशा गरे। यसको सट्टा तिनीहरूले rent१ मिनेटमा द एन्ट्रेन्टिसमा यसको १,००० सॉलिस्टेसहरू बेचे।
जब उपभोक्ताहरू बढि प्रतिरोधात्मक हुन्छन् वा विज्ञापनमा सादा भावशून्य हुन्छन्, उत्पाद प्लेसमेन्ट जस्ता रणनीतिहरूले गति लिन गरिरहेका छन्। चलचित्र उद्योगको समानान्तर सामग्री उद्योगमा प्रायोजन हो। सामग्री विकासकर्ताहरूले अधिकार निर्माण गर्ने र आफ्ना दर्शकहरू बढाउने क्रममा प्रायोजनको माध्यमबाट राजस्व वृद्धि गर्ने अवसर निर्माण गर्दैछ। Martech Zone फरक छैन ... जुमेरंग र डिलिभ्रा हाम्रो क्षमता बढाउन र मार्टेकमा लगानी जारी गर्न अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। (हामी अतिरिक्त प्रायोजकहरू पनि खोज्दैछौं, यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने)।
केवल भिन्नता जुन मैले व्यक्तिगत रूपमा देख्छु प्रत्येकसँग सम्बन्धित संघीय नियमहरू हुन्। मैले लेख्ने सामग्री भित्र रहेको प्रत्येक एकल सम्बन्धलाई मैले सार्वजनिक रुपमा खुलासा गर्नुपर्दा, चलचित्र उद्योगले फिल्मको अन्तमा केहि जानकारीको उल्लेख गर्दछ। राजनीतिमा त्यो हलिउडको पैसाले साँच्चै फरक पार्छ!
दर्शक निर्माण गर्न समय र धेरै प्रयास चाहिन्छ। त्यो दर्शकको साथ कसैलाई खोज्नु र उनीहरूसँग साझेदारी गर्नु एक उत्तम विकल्प हो। यो ब्लगको साथ, यो अत्यावश्यक छ कि हाम्रा प्रायोजकहरू ठूला कम्पनीहरू बन्न सक्छन् किनकि हामी हाम्रो प्रतिष्ठा राख्दैछौं र श्रोताहरूलाई प्रोत्साहन दिंदा उनीहरूलाई जोखिममा पार्दछन्। मलाई थाहा छैन कि फिल्महरू त्यति जोखिममा छन्! एक फिल्म जुन बम बजारले उनीहरूको प्रचार गरिरहेका उत्पादनलाई आवश्यक रूपमा तल दिदैन ... र एक आकर्षक उत्पादले चलचित्रबाट टाढा लैजान्दैन।
द्वारा: अनलाइन एमबीए सल्लाह
टैग: स्याउ उत्पादन प्लेसमेन्टर उत्पाद प्लेसमेन्टहलिउडहलिउड उत्पादन स्थानइंफोग्राफ़कजेम्स बांड उत्पादन स्थानचलचित्र उत्पादन प्लेसमेन्टउत्पाद प्लेसमेन्टखेलौना कहानी उत्पादन स्थान
नोभेम्बर २०, २००। 21::2011 अपराह्न
ब्रान्ड पign्क्तिबद्धता अब ठुलो छ। उत्पादन प्लेसमेन्टले यसको साथ मद्दत गरेको छ, र मलाई लाग्छ कि यो बढ्दो रहनेछ।